ထူးခြားတဲ့ ဒီနေ့လိုရက်ကောင်းရက်မြတ်လေးမှာ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ် အလှူလေးပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ရီရီပွင့်ဖြူ – Shwe Likes
ထူးခြားတဲ့ ဒီနေ့လိုရက်ကောင်းရက်မြတ်လေးမှာ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ် အလှူလေးပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ရီရီပွင့်ဖြူ
Shwe | February 22, 2022 | Celebrity | No Comments
ပရိ သတ်ကြီးရေ စိန်ဖြိုး ကတော့ တစ်ခတ်တစ်ခါ နာမည်ကြီး မင်းသ မီးနန္ဒါလှိုင် ရဲ့အငယ်ဆုံးမော င်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ အလုပ်တွေကို မောင်ဆို တဲ့ နာမည်နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ ပြီး အခုချိန်မှာတော့ေ မာ်ဒယ်လ်မင်း သမီး​ဟောင်းတ​စ် လက်ဖြစ်တဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူနဲ့ ချစ်သူတြွေ ဖစ်ကာ vlog လေးတွေကို SeinPhyi&Yi Page ကနေ တင်လျက် ရှိတာပါ။
ချစ်သူသက် တမ်း ၉နှစ်ရှိ တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိန်ဖြိုးနဲ့ရီရီ တို့ကတော့ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ဖေေ ဖာ်ဝါရီလ၂၂ရက်နေ့မှာ” 22.2.22 ဒီနေ့လို ထူးခြားတဲ့ ရက်ကော င်းရက်မြတ် လေးမှာ စိန်ဖြိုးနဲ့ရီ တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်း ကပ်အလှူလေး ပြုခဲ့ပါတယ်….
ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ မှာကျော င်းတိုက် ဧည့်သည်မ ပါဘဲ ၂ယောက်တည်းပဲ ရေစက်ချ တရားနာပြီး တနေ့တာဆွ မ်းကပ်လှူလိုက် ပါတယ်…။ သံဃာတော်ေ တွကိုလည်း အရင်လိုဆွ မ်းစားဆောင်မှာ ဆွမ်းကပ်တာ မျိုးမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းဆောင်ေ တွကို ဆွမ်းချိုင့်နဲ့ ပို့ဆွမ်း ကပ်ရပါ တယ်…။
ပြီးမှ နှစ်ဘက်မိ သားစုဆွေမျိုးေ တွအိမ်ကို မုန့်လိုက် ပို့တယ်… ရုံးက လုပ်ဖော်ကို င်ဖက်တွေနဲ့ ကိုလည်း ပါဆယ်နဲ့ပဲ မုန့်လိုက်ဝေ လိုက်တယ်…မိဘတွေကိုရော ကျောင်းကဘု န်းဘုန်းတွေေ ရာ လာမယ့် ဧည့်သ ည်တွေရော Covid ကူးစက်တာမျိုးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာေြ ကာင့် ခုလိုလေးပဲ စီစဉ်လိုက်ရ ပါတယ်….
ရိုးရိုးရှင်းရှ င်းလေးပဲဖြတ် သန်းခဲ့ရပေမယ့် ဒီနေ့ေ လးက လာမယ့်နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်းမှာ မင်္ဂလာနှစ်ပ တ်လည်နေ့ေ လးအဖြစ် အမြဲအမှတ်တရ ရှိေ နမှာပါ… 🥰🥰🥰”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ ရိုးရှင်းလှတဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ်ေ လးကိုြပုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးေ တွတင်လါခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေ အတွက်စိန်ဖြိုးနဲ့ရီရီတို ့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကပ်ပုံရိပ်ေ လးတွေ ကို တင်လာခဲ့တာပါ။ Credit- CeleGabar
ပရိ သတ္ႀကီးေရ စိန္ၿဖိဳး ကေတာ့ တစ္ခတ္တစ္ခါ နာမည္ႀကီး မင္းသ မီးနႏၵါလွိုင္ ရဲ့အငယ္ဆုံးေမာ င္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ေမာင္ဆို တဲ့ နာမည္နဲ႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ေ မာ္ဒယ္လ္မင္း သမီး​ေဟာင္းတ​စ္ လက္ျဖစ္တဲ့ ရီရီပြင့္ျဖဴနဲ႔ ခ်စ္သူေႂတြ ဖစ္ကာ vlog ေလးေတြကို SeinPhyi&Yi Page ကေန တင္လ်က္ ရွိတာပါ။
ခ်စ္သူသက္ တမ္း ၉ႏွစ္ရွိ တဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စိန္ၿဖိဳးနဲ႔ရီရီ တို႔ကေတာ့ဒီေန႔ က်ေရာက္တဲ့ေဖေ ဖာ္ဝါရီလ၂၂ရက္ေန႔မွာ” 22.2.22 ဒီေန႔လို ထူးျခားတဲ့ ရက္ေကာ င္းရက္ျမတ္ ေလးမွာ စိန္ၿဖိဳးနဲ႔ရီ တို႔ရဲ့ မဂၤလာဦးဆြမ္း ကပ္အလႉေလး ျပဳခဲ့ပါတယ္….
ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာ မွာေက်ာ င္းတိုက္ ဧည့္သည္မ ပါဘဲ ၂ေယာက္တည္းပဲ ေရစက္ခ် တရားနာၿပီး တေန႔တာဆြ မ္းကပ္လႉလိုက္ ပါတယ္…။ သံဃာေတာ္ေ တြကိုလည္း အရင္လိုဆြ မ္းစားေဆာင္မွာ ဆြမ္းကပ္တာ မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းေဆာင္ေ တြကို ဆြမ္းခ်ိဳင့္နဲ႔ ပို႔ဆြမ္း ကပ္ရပါ တယ္…။
ၿပီးမွ ႏွစ္ဘက္မိ သားစုေဆြမ်ိဳးေ တြအိမ္ကို မုန႔္လိုက္ ပို႔တယ္… ႐ုံးက လုပ္ေဖာ္ကို င္ဖက္ေတြနဲ႔ ကိုလည္း ပါဆယ္နဲ႔ပဲ မုန႔္လိုက္ေဝ လိုက္တယ္…မိဘေတြကိုေရာ ေက်ာင္းကဘု န္းဘုန္းေတြေ ရာ လာမယ့္ ဧည့္သ ည္ေတြေရာ Covid ကူးစက္တာမ်ိဳးျဖစ္မွာ စိုးရိမ္တာေျ ကာင့္ ခုလိုေလးပဲ စီစဥ္လိုက္ရ ပါတယ္….
ရိုးရိုးရွင္းရွ င္းေလးပဲျဖတ္ သန္းခဲ့ရေပမယ့္ ဒီေန႔ေ လးက လာမယ့္ႏွစ္တိုင္း ႏွစ္တိုင္းမွာ မဂၤလာႏွစ္ပ တ္လည္ေန႔ေ လးအျဖစ္ အျမဲအမွတ္တရ ရွိေ နမွာပါ… 🥰🥰🥰”ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ ရိုးရွင္းလွတဲ့ မဂၤလာဦးဆြမ္းကပ္ေ လးကို ျ ပုလုပ္ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေ တြတင္လါခဲ့တာပါ။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္စိန္ၿဖိဳးနဲ႔ရီရီတို ့ရဲ့ မဂၤလာဦးဆြမ္းကပ္ပုံရိပ္ေ လးေတြ ကို တင္လာခဲ့တာပါ။ Credit- CeleGabar
လူရွှင်တော် ကောင်းကျော် ကို စစ်ကောင်စီတပ် အင်အားအများအပြားဖြင့် ဖမ်းဆီး
ခုလိုအချိန်အထိ အမြဲအတူရှိပေးလို့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ဝင် ညီအကိုတွေ ကို ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုလို က်တဲ့ တိုင်းကျော်
မတရားဟော့တဲ့ ရေကူးဝတ်စုံရော ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် မြန်မာဝတ်စုံ နဲ့ ပါကြည့်ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ